China Kuqondile 1200W 755nm 808nm 1064nm diode laser machine Manufacture and Factory | I-GGLT
Kuqondile 1200W 755nm 808nm 1064nm diode laser umshini
Sebenzisa umshini wokususa izinwele ongu-755nm 808nm 1064nm unomphela, ukujula okusebenzayo kwe-wavelength kungafinyelela izicubu ezihlosiwe (papillary), uthathe izinyathelo ezifanele zokuvikela isikhumba ukuqinisekisa ukuthi izicubu ezihlosiwe zonakele ngokwanele futhi nesikhumba cishe asithinteki, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe impilo yesikhumba Ukwelashwa okuphephile. Ngokuyisisekelo vimbela izinwele ukuthi zingakhuli futhi, ngaleyo ndlela zisuse unomphela izinwele.
1. Ukususwa kwezinwele unomphela ngombala wezinhlobo zonke: izinwele zangaphambili, izinwele zomlomo, intshebe, izinwele zekhwapha, izinwele zesifuba, izinwele zangemuva, izinwele zengalo, izinwele zomlenze nezinwele ze-bikini.
2. Ukususwa kwezinwele kumbala wazo zonke izinhlobo zesikhumba: okumhlophe kakhulu (amaphuzu we-0 ~ 7); okumhlophe (amaphuzu ayi-8 ~ 16); okujwayelekile (amaphuzu ayi-17 ~ 25), ansundu (amaphuzu angama-25 ~ 30), amnyama (amaphuzu angama-30 +), njll.
3. Susa uhlobo lwezinwele oluhlukile: izinwele ezinhle, izinwele eziphakathi, izinwele ezimangele.
4. Ukususwa kwezinwele / Ukuncishiswa kwezinwele / Ukwehla / Ukwelashwa kwe-Epilation.
Hlanganisa ama-wavelengths amathathu asebenza kakhulu e-laser (808nm + 755nm + 1064nm), abenza bakwazi ukuguquguquka kuzo zonke izinhlobo zesikhumba nawo wonke umbala wezinwele
-Smarter nokusebenza okuningi okuphephile:
Onobuhle abangenalwazi bangenza ukwelashwa kalula nge-smart mode ekhethekile.Ngasikhathi sinye, sizokunikeza ukuqeqeshwa kokusebenza kobungcweti.
-Umuzwa okhululekile wokususa izinwele
Isistimu yokupholisa esezingeni eliphakeme kanye ne-tip yesafire ebandayo kunciphisa ubungozi be-epidermal ngenkathi kugcina ukushisa ngaphakathi kwesikhumba lapho kulashwa khona izintambo zezinwele.Qiniseka ukuthi ukwelashwa kuphephe kakhulu futhi kunethezekile.
I-755nm 808nm 1064nm diode laser
Q1.Ungafaka kaningi kangakanani i-laser ubuso bakho?
I-A1: Iziguli eziningi zingasuswa izinwele laser kanye njalo emavikini amane kuya kwayisithupha. Udokotela wesikhumba sakho uzokutshela ukuthi kuphephe nini ukuthola olunye ukwelashwa. Iningi leziguli libona ukuvuselelwa kwezinwele. Udokotela wesikhumba sakho angakutshela lapho ungathola ngokuphepha imishanguzo ye-laser ukugcina imiphumela.
Q2.Ihlala isikhathi esingakanani imiphumela yokususwa kwezinwele ze-laser?
I-A2: Ebusweni, ukususwa kwezinwele ze-laser akujwayelekile unomphela kepha kungahlala isikhathi eside. Abanye abantu babika ukuthi abaziboni izinwele emuva kweminyaka eyi-10 noma ngaphezulu. Abanye baba nokuhluma kabusha ngokushesha futhi bathembele ekwelashweni kwe-touchup minyaka yonke ukuze kugcinwe izinwele ezingafuneki
Langaphambilini Ukukhiqiza 1000W diode laser izinwele ukususwa intengo umshini
Olandelayo: Imishini yokususa izinwele engu-2 kwezingu-1 enamandla
I-CE 755 + 808 + 1064 diode laser hair isusa imigoqo engu-10
OEM / ODM 20 million isibhamu 808nm diode laser izinwele ...
Ukususwa okusheshayo kwe-Wavelength Diode Laser Izinwele ...
China wenza 1000W epilator laser diode nge okuhle ...